Ithegi: ii-gifs zoopopayi | Martech Zone
Ithegi: ii-gifs zoopopayi
I-Instagram inabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-500 ezisebenzayo yonke imihla, oko kuthetha ukuba ubuncinci isiqingatha sesiseko somsebenzisi ngokubanzi sokujonga i-Instagram okanye ukudala amabali yonke imihla. Amabali e-Instagram aphakathi kweendlela onokuthi uzisebenzise ukunxibelelana nabaphulaphuli bakho ojolise kubo ngenxa yeempawu ezintle ezingasoloko ziguquka. Ngokwezibalo, iipesenti ezingama-68 zewaka leminyaka zithi babukela amabali e-Instagram. Ngenani eliphezulu labasebenzisi abalandela abahlobo, abadumileyo,
Ngaba iPinterest yakho yoPhononongo lweFowuni?
NgeCawa, Agasti 3, 2014 NgoMgqibelo, nge-4 kaFebruwari ngo-2017 Douglas Karr
Njengakwiwebhu, i-imeyile kunye nazo zonke ezinye iindlela-abathengisi kufuneka bathathe iselfowuni bayithathele ingqalelo njengoko bevelisa, bebonisa kwaye babelana ngomxholo wabo kwindawo yabo, imiyalezo kunye namanye amaqonga. Iqonga elinye elinobukho obuhambahambayo yiPinterest. Isicelo sePinterest esiphathwayo sikhutshelwe izigidi zamaxesha kwaye siyaqhubeka njengeqonga lokufumanisa elithandwayo. Ngapha koko, iindwendwe ezi-3 kwezi-4 zisePinterest zikwisixhobo esiphathwayo